Naseho ny : 7 desambra 2019
Sabotsy 07 desambra 2019 - Herinandro voalohany amin'ny Fiavian'ny Tompo.
Evanjely Masina nosoratan'i Masindahy Matio 9, 35 — 10, 1. 6-8.
Manandrata feo eny amin'ny tendrombohitra ianao izay mitory teny soa. Indro fa tonga amin'ny heriny ny Tompo.
Izay manao ny sitrapon'ny Raiko...
Alakamisy 05 desambra 2019 - Herinandro voalohany amin'ny Fiavian'ny Tompo.
Evanjely Masina nosoratan'i Masindahy Matio 7, 21. 24-27.
Indro avy ny Tompo hanavotra ny vahoakany. Sambatra izay vonona hitsena Azy.
Talata 03 desambra 2019 - Herinandro voalohany amin'ny Fiavian'ny Tompo.
Evanjely Masina nosoratan'i Masindahy Matio 10, 21-24.
Avia ry Tompo, vangio am-piadanana izahay mba hifalianay amin'ny fo lavorary.
Pejy 101 amin'ny 102